JUNE&MAY: မြန်မာအတန်း သူငယ်တန်း..
Posted by JuneOne at 5:19 PM
ကလေးတွေလဲ မလွယ်ဘူးနော်။ မိဘတွေရောပါပဲ။
Edwinလေးက မြန်မာစာသင်ရတာ စိတ်ဝင်စားလို.တော်သေးတယ်။
Hi Sis, you can consider to send your kids to those Myanmar Sunday schools. They taught kids not only Burmese language but also manners related to our culture and tradition.
JuneOne August 7, 2014 at 6:01 PM
အမရေ...ပန်းတိုင် သူငယ်တန်း စာအုပ်လို့ ရန်ကုန်မှာမေး ၀ယ်လိုက်ပါ..အားလုံး ပါတယ်..
ကျွန်မလည်း သမီးလေး ကို ဒီနှစ် သူငယ်တန်း ဖြေမှာပါ...ကျွန်မဆီ မှာ အားလုံး ရှိပါတယ်..